Fampiharana ny didim-pitsarana : nihemotra amin’ny hisamborana an-dRavalo ny fitondrana | NewsMada
Fampiharana ny didim-pitsarana : nihemotra amin’ny hisamborana an-dRavalo ny fitondrana
Nihemotra tamin’ny fotoana farany ? Efa nananontanona tany ny didy fampisamborana ny filoha teo aloha, Ravalomanana, ho tohin’ny resaka didim-pitsarana, nambaran ‘ny minisitry ny Fitsarana, ny talata teo. Tokony ho nanao fanoherana ny didim-pitsarana ny filoha teo aloha manoloana ny didy nivoaka, manameloka azy higadra mandra-pahafaty noho ny “Raharaha 7 febroary”. Nomena fe-potoana ny tenany hanaovana izany tao anatin’ny 72 ora ka mety efa dila izany ary izao niketrehana ny hisamborana azy izao. Voalaza fa efa tonga teny amin’ny trano fonenan’ny filoha teo aloha, eny Faravohitra ny vadintany nampahafantatra ny didy momba ny saziny tamin’ity herinandro ity saingy tsy teo Ravalomanana. Ho tonga amin’izao fikasana fisamborana izao izany ny raharaha.
Nialoha ireo anefa, efa nikaondoha ireo mpisolovava rehetra manodidina ny mpanorina ny Tim. Tsy fantatra ny fanapahan-kevitr’izy ireo. Nitohy tamin’ny fahatongavan-dRatsirahonana Norbert Lala teny amin’ny filoha teo aloha, teny Faravohitra izany, mbola tamin’ity herinandro ity ihany, saingy tsy nisy nipika ny dinika na naharitra aza.
Lasa any Kenya sy ho any Paris Ravalomanana
Etsy andaniny, lasa nihazo ny any Kenya hihaona amin’ny filoha Uhuru Kenyatta Ravalomanana, omaly tolakandro. Laharana faharoa tamin’ilay fifaninana « ALM Person of the year 2017″, aorian’ny mpanorina ny Tim, ny filoha kenyanina. Hihazo an’i Paris avy eo ny tenany hihaona amin’ireo Tim any Eoropa amin’izao taona vaovao izao. Mety hatao sambo-dokotra eny Ivato izany izy rehefa tafaverina rehefa tsy namoahana ny fepetra tsy fahazoana mivoaka any ivelany (IST) ?
Hatreto aloha izany, mifamahofaho be ny raharaha amin’izao nikasan’ny mpitondra hisamborana an-dRavalomanana izao ka hampidirana am-ponja azy. Didim-pitsarana ny taona 2010 ny antony, niainga amin’ilay valandresaka nataon’ny minisitry ny Fitsarana.
Etsy andaniny, sahirana ny fitondrana manoloana ny mpanorina ny Tim, amin’izao mialoha ny fifidianana izao. Tsy mahagaga raha mikasa hisambotra azy ireo mahery fihetsika ao ambony ao ary miketrika ny hampanginana azy mihitsy. Misy kosa anefa ireo tony fihetsika ka manahy ny amin’ny hoavy raha samborina tokoa Ravalo. Tsy ho moramora izany. Hiteraka olana sy korontana ary krizy eto amin’ny firenena ny fanagadrana an-dRavalo. Mpitandro filaminana iza sy avy aiza no hisambotra eo ? Adihevitra nandeha tany ambony tany sy teo amin’ny samy mpitandro filaminana avokoa izany.
Tsindry avy amin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena
Ankoatra izany, mety teo koa ny tsindry avy amin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena, indrindra ny Amerikanina sy ny Frantsay, tsy mankasitraka izany. Vao mainka ho ratsy endrika eto amin’ny firenena sy ny vahoaka mpiandany amin-dRavalo ary amin’ireo firenen-dehibe ity fitondrana HVM ity. Hijanona ho resabe fotsiny ny fampihavanam-pirenena sy ny fidradradrana fitoniana politika ?
Tsiahivina fa efa nisambotra sy nanagadra ny filoha teo aloha ny fitondrana HVM raha vao tafaverina teto an-tanindrazana, ny 13 oktobra 2014, izy.